Iziqhano zeeglavu ezinokutsalwa ezilahlwayo ngokugqibeleleyo kunye neFektri | Huanna
Ukuhlala usempilweni kwaye ucocekile, iiglavu zethu ezinokutsha ezilahlwayo lolona khetho lwakho. Zenziwe ngezinto ezisekwe kwizityalo (i-PLA), zine-100% ezinokuchuma kwaye zinokuboliswa ziintsholongwane. Umzekelo, baya kuthoba isidima ngokupheleleyo ngeentsuku ezili-180 kwindawo yemizi-mveliso yokwenza umgquba. Ukuba kwimeko yendalo, imathiriyeli ithatha malunga neminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ukuthotywa ngokupheleleyo.
Ubunzima: 100-140G Ubukhulu: 2.1 micron
Ukusetyenziswa: Ukucoca, ukucoca, ukuhlamba, ukwahlula ioyile kunye nothuli Izinto zangaphandle: IPLA
Izinto: Pla, PBAT, 100% ezinokuboliswa ziintsholongwane PLA Indawo yokuQala: IShanghai, iTshayina
Igama lebrand: NATUREPOLY Inombolo yomzekelo: I-HNM-GLO01
Igama lemveliso: Iziqhano ezinokuboliswa ziintsholongwane Ubukhulu: Ubungakanani obunye
Umbala: Kucacile Isiqinisekiso: Isatifikethi seBanga lokutya, isatifikethi se-biodegradablility
Phawu: Biodegradablitiy, uzinzo,
Umphezulu ogudileyo kunye noFlexible MOQ: Iibhokisi ezingama-2000
Ilogo: Ngentando Ukupakisha: 100pcs kwibhokisi nganye
Ukuhlala usempilweni kwaye ucocekile, iiglavu zethu ezinokutsha ezilahlwayo lolona khetho lwakho. Zenziwe ngezinto ezisekwe kwizityalo (i-PLA), zine-100% ezinokuchuma kwaye zinokuboliswa ziintsholongwane. Umzekelo, baya kuthoba isidima ngokupheleleyo ngeentsuku ezili-180 kwindawo yemizi-mveliso yokwenza umgquba. Ukuba kwimeko yendalo, imathiriyeli ithatha malunga neminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ukuthotywa ngokupheleleyo. Ke ngoko, iimveliso zethu lolona khetho lufanelekileyo ukuba ungathanda ukukhusela indalo. Ezi mveliso zilungele irestyu kunye nokusetyenziswa kwekhaya, okanye naziphi na iindawo zikawonke-wonke apho ucoceko luphambili. Ukuba ufuna ukusebenzisa iiglavu ezilahlwayo kwaye uhlale uluhlaza, sebenzisa iiglavu zethu zePLA. Iiglavu zePLA sisisombululo esifanelekileyo sokugcina izandla zakho zicocekile kunye nokugcina okusingqongileyo kukhuselekile. Ngaphezu, sinako ukubonelela iimveliso ngentando ezifana ubungakanani, umbala njalo njalo. Ewe kunjalo, sinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha ngombono wakho owahlukileyo.
Ukwenza ixabiso elongezelelweyo kubathengi yifilosofi yethu yeshishini, kwaye sijonge ngokunyanisekileyo ekusebenzisaneni nabathengi kwihlabathi liphela. Siyakholelwa ukuba sinokuzanelisa iimfuno ezahlukeneyo zabathengi kuba sikwazile ukuvelisa iimveliso ezintsha ngokuqhubekayo ukuya kwinqanaba eliphezulu. Siyakwamkela ngokufudumeleyo abathengi ukuba batyelele inkampani yethu kwaye bathenge iimveliso zethu. Qiniseka ukuba uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngeshishini kwaye siyakholelwa ukuba siza kwabelana ngamava aphezulu okurhweba kunye nabo bonke abathengisi bethu.
Egqithileyo Ingxowa yenkunkuma
Okulandelayo: Ifilimu yokuSonga iMizi mveliso
Iziqhano ezinokuboliswa ziintsholongwane
Iziqhano ezinyukayo ezinokuboliswa ziintsholongwane
Iziqhano ezilahlwayo ezinokuboliswa ziintsholongwane